Home » Vaovao momba ny dia any Eropa » Ny EU dia nanala ny Digital Green Certificate ho an'ireo mpandeha vita vaksinin'ny COVID-19
Nasongadin'ny Vaomiera eropeana fa vonjimaika ireo mari-pankasitrahana ary ho foanana rehefa vita ny areti-mandringana COVID-19
EU Digital Green Certificate nanolotra ny vaksiny COVID-19
Ny Digital Green Certificate dia andrasana hampidirina ao anatin'ny EU amin'ny tapaky ny volana Jona
Ny tifitra COVID-19 dia tsy ho voatery hivezivezena amin'ny fitetezam-paritany any EU
Ny manampahefana ao amin'ny Vondrona eropeana dia namoaka ny fiheverana momba ny Digital Green Certificate izay natao hanaporofoana ny vaksinin'ny COVID-19. Ny mari-pahaizana Digital Green dia andrasana hampidirina ao anatin'ny EU amin'ny tapaky ny volana Jona.
The Vaomiera Eoropeana namoaka ity fanambarana manaraka ity tany Bruxelles:
“Androany, ny komisiona dia naka tolo-dalàna momba ny lalàna hametrahana rafitra iraisana momba ny Digital Green Certificate momba ny vaksiny, ny fitiliana ary ny fanarenana. Ity dia fomba iray eo amin'ny sehatra Eoropeana amin'ny famoahana, fanamarinana ary fanekena mari-pankasitrahana hanamorana ny fivezivezena malalaka ao amin'ny EU, mifototra amin'ny fanajana henjana ny tsy fanavakavahana sy ny zon'olom-pirenena EU. Ny rafitra ara-teknika dia hofaritana eo amin'ny sehatry ny EU, apetraka amin'ny tapaky ny volana jona, hiantohana ny filaminana, ny fiaraha-miasa ary ny fanarahan-dalàna tanteraka amin'ny fiarovana ny angona manokana. Izy io koa dia hahafahana manitatra ireo mari-pankasitrahana mifanentana navoaka tany amin'ny firenena fahatelo. ”
Nanamafy ny kaomisera misahana ny fitsarana Didier Reynders fa mihelina ihany ireo mari-pankasitrahana ary ho foanana rehefa vita ny areti-mandringana COVID-19.
Araka ny voalazan'ny The European Commission, ny tifitra COVID-19 dia tsy ho voatery handehanana amin'ny fifindra-monina any EU.
Ny fanolorana ny taratasy fanamarinana ny vaksiny no dingana voalohany mankany amin'ny tena famoronana ny antontan-taratasy. "Ny parlemanta eropeana sy ny filankevitra dia tokony hanara-maso haingana ny fifanakalozan-kevitra, hanatanteraka marimaritra iraisana momba ny tolo-kevitra momba ny mari-pahaizana nomerika nomerika ary hanaiky ny fomba fanokafana azo antoka mifototra amin'ny rafitra siantifika mivaingana. Ny komisiona eropeana dia hanohy ny fanohanana ny fanamafisana ny famokarana vaksinina, ary hikaroka vahaolana ara-teknika hanamafisana ny fifandraisan'ny rafitra nasionaly hifanakalo data. Ny firenena mpikambana dia tokony hanafaingana ny programa fanaovana vaksiny, hiantohana fa ny famerana vonjimaika dia mifandanja ary tsy manavakavaka, manondro teboka fifandraisana mba hiaraha-miasa amin'ny fanaraha-maso ny rano maloto ary hanao tatitra momba ny ezaka natao, ary handefa ny fampiharana ara-teknika ny Digital Green Certificat raha jerena ny fananganana haingana. ny tolo-kevitra », hoy ny fampitam-baovao.
"Amin'ny volana jona 2021, araka ny fangatahan'ny filankevitra eropeana, ny komisiona eropeana dia hamoaka taratasy momba ny lesona nianarana avy amin'ny areti-mandringana sy ny làlana mankany amin'ny ho avy azo antoka kokoa", hoy ny fehin-kevitry ny komisiona.
Grand Bahama Island vonona ny hitsangatsangana indray amin'ny fanitarana sy fanavaozana ny seranam-piaramanidina